Basket Ball : Nanjakan’ny Reste du Monde ny Fiba 33
Lavon’ny Reste du Monde fanindroany , ny Inconnu nandritra ny fifaninanana basket lalaovin’olona telo, notontosaina teny amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, omaly.
Teo amin’ny fifanintsanana dia efa resin’ity ekipa noforonin’ireo mpilalao tsy tafiditra indrony tao anatin’ny lisitry ny ekipam-pirenena malagasy ity ny Inconnu (9-4). Isan’ireo mpilalao nandrafitra ity ekipan’ny Reste du Monde ity ary ry Tony, Chancy, Saka ary Fidy fotsy. Tao amin’ny Inconnu kosa i Guy Stevel, Rado, Lava ary Heritiana, izay samy ao amin’ny klioban’ny Cosfa. Teo amin’ny famaranana dia mbola niondrika tamin’ny alalan’ny isa 9 no ho 5 indray ireto ekipan’ny Inconnu ireto.
Ekipa 10 no nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity, izay noentina nampahafantarana ity taranja vao aparitaky ny Fiba ity.